Sweden: Hooyo soomaali ah oo lagu dacwaynayo inay wiilkeeda u fududeysay kamid noqoshada Al shabaab | shumis.net
Home » Layaab » Sweden: Hooyo soomaali ah oo lagu dacwaynayo inay wiilkeeda u fududeysay kamid noqoshada Al shabaab
Sweden: Hooyo soomaali ah oo lagu dacwaynayo inay wiilkeeda u fududeysay kamid noqoshada Al shabaab
Dacwad ka dhan ah hooyo soomaali ah oo haysata dhalashada wadanka Sweden ayaa ka bilaabatay magaalada Nykøping ee wadanka Sweden. Hooyadan ayaa lagu haystaa inay gacan ka gaysatay kamid noqoshada wiil ay dhashay uu uga mid noqday ururka Al shabaab ee ka dagaalamo Soomaaliya.
Haweenaydan oo 30 sano jir ah ayaa la sheegay inay wax ka abaabushay safarka uu wiilkeeda oo 15 sano jir ah uu uga baxay Sweden, kuna aaday Soomaaliya si uu uga mid noqdo dagaalyahanada ururkaas xagjirka ah.
Booliska magaalada Nykøping, gaar haan waaxda danbiyada caruurta ayaa sheegtay inay xiriir la sameeyeen wiilkan isaga uu ku sugan Soomaaliya, balse waxay ka gaabsadeen inay sheegaan in wiilkan uu Sweden kusoo noqday iyo inkale.
Title: Sweden: Hooyo soomaali ah oo lagu dacwaynayo inay wiilkeeda u fududeysay kamid noqoshada Al shabaab
Posted by Unknown, Published at September 04, 2016 and have 0 comments